Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 24/04/2020)
Ukuze wonke umuntu othanda aluhlaza, Knockout ubuhle, izinqaba nokushona kwelanga igeziwe izivini, lokhu elula ebabazekayo kanye eMfuleni iRhine yilapho okufanele uhambe ngayo. I ride isitimela phakathi amadolobha German Cologne futhi Mainz ingenye uzoba ukukhumbula kuze kube phakade naphakade. Its namathafa isithombe-ephelele ngeke ngikushiye Breathless! romantics Iqiniso abakholelwa eziphethweni ezijabulisayo futhi magic Fairytale ngeke simdumise izinqaba ebukekayo livela kumabhilidi izivini oluhlaza. I West Rhine ujantshi waziwa emhlabeni wonke njengengxenye "zothando Rhine" uhambo, ngakho uma uthola umuntu omthandayo ukuletha kanye, ukwenza kanjalo. Uzoba isikhathi ongenakulibaleka, esifanayo abanye abantu abaningi abenze West Rhine ujantshi ingxenye European isitimela izinkambo zabo.
I Lyon enhle lesithathu idolobha elikhulu kunawo wonke France futhi isikhungo kweqiniso ashukumisayo yezwe. Impela a ezikulungele ukuhlala kuzona kakhulu futhi ekhululekile lapho uya khona inhloko-dolobha, zokuzijabulisa kuwo wonke amagumbi. Lyon has konke: iminyuziyamu, zokudla, boutiques, nezitolo yasekuqaleni, kanye Inani elikhulu imigoqo kanye amakilabhu. Libuye inyuvesi ukhombise impilo idolobha, kahle kuwufanele ukuvakashelwa ku European isitimela izinkambo yakho. izakhiwo amahle ebheke eMfuleni Rhone, elikhulu amapaki futhi isimo ukuziqhayisa amathonya ahlukahlukene French kwamasiko - yini singayithandi?
Ayikho isitimela izinkambo European ziphelele ngaphandle ogibela adabule namathafa olunothile Tuscany. Le ndawo ye-Italy izipesheli zokungcebeleka obumangalisayo futhi inikeza abaningana amaphuzu ezithakazelisayo omthemba kumele uvakashele. Kusukela yisakhiwo sodumo kakhulu Renaissance ubuciko Michelangelo futhi Botticelli, ukuze imisebenzi Mother Nature sika ezinhle kakhulu Apennines, Tuscany awuve umuhle. A kahle kuhlelwe isitimela uhambo kungathatha wena ngasogwini Tyrrhenian Sea, noma ake ubona ezivinini odumile wase- Chianti.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-european-train-tours/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Indlela Phathani Ukuze Isitimela Trip Across Italy